Golaha Gudiga Wareegga - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Wareegga- Golaha Golaha - PCBFuture
Erayoxul: Khadka PCB, Golaha SMT PCB, Adeegga Turnkey, shirkii guddiga wareegga
Macaamiisha ugu muhiimsan ee PCBFuture waxay ka yimaadaan soosaarayaasha dhexdhexaadka ah ee ka ganacsada elektarooniga macaamiisha, alaabada dhijitaalka ah, isgaarsiinta wireless, maaraynta warshadaha iyo otomatiga, daaweynta caafimaadka, iwm. Macaamiilkeena adag ee macaamiisha ah waxay siisaa dhiirigelin xoog leh horumarka shirkadda mustaqbalka.
Maxaan u dooran karnaa adeeggayaga guddiga-wareegga-guddiga?
1. Deg deg u noqo nooc iyo wax soo saar badan oo PCB ah
Waxaan u hibeynay soo saarida 1-28layer si dhakhso ah, nooc iyo waxsoosaarka waxsoosaarka PCBs sare oo leh mabda'a "tayada ugu fiican, qiimaha ugu hooseeya iyo waqtiga ugu dhaqsaha badan ee bixinta"
Awoodaha wax soo saarka OEM adag
xarumaheena wax soo saarka waxaa ka mid ah aqoon isweydaarsiyo nadiif ah iyo afar khadad SMT oo casri ah. Xaqiijinta meelayntu waxay ku gaari kartaa qashin + 0.1MM qaybaha wareegga isku dhafan, taas oo macnaheedu yahay inaan la tacaamuli karno dhammaan noocyada wareegyada isku dhafan, sida SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP iyo BGA. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku siin karnaa meeleynta qashin-qubka 0201 iyada oo loo marayo isku-darka qaybaha godadka iyo soo-saarista alaabada dhammaatay.
3.Waxaa ka go'an hagaajinta tayada wax soo saarka
Waxaa naga go'an inaan horumarino tayada PCB-yada. Hawlgalkeennu wuxuu dhaafey ISO 9001: 2000-shahaado haysta, alaabtayaduna waxay heleen calaamadaha CE iyo RoHS. Intaa waxaa dheer, waxaan codsaneynaa shahaadada QS9000, SA8000.
4. Caadi ahaan 1 ~ 5 maalmood oo keliya kulanka PCB; 10 ~ 16 maalmood oo loogu talagalay shirkii PCB-ga ee loo yaqaan 'turnkey PCB'.
1.PCB bixinta iyo qaabeynta
2.Waxay udheelayaan qaybaha
3.X-ray AOI baaritaanka
6.Package iyo logistics & adeegga iibka kadib
7.Fromosoosaarka waxsoosaarka iyada oo loo marayo iskuxirka PCB, qaybaha kaabaya, soosaarka wax soo saarka cusub, baaritaanka PCB, dammaanadaha dayactirka iyo dayactirka, iyo saadka.
Qaar ka mid ah qaybaha aasaasiga ah ee loogu baahan yahay shirarka wareegga daabacan:
Guddiga wareegsan ee daabacan: Waa shuruudaha ugu muhiimsan ee geeddi-socodka shirka.
Qaybaha elektaroonigga ah ee aasaasiga ah: Waxaad u baahan tahay dhammaan qeybaha elektarooniga ah sida transistors, diods iyo resistors.
Wax alxanka: Waxyaabaha waxaa ka mid ah Jinka Alxan, bar Alxan iyo silig Alxan. Waxaad sidoo kale u baahan tahay kubbado dhejis ah iyo kuwo la sii dheereeyo. Flux waa walxo kale oo muhiim ah oo la sii daayo.
Qalabka alxanka: Qalabkan waxaa ka mid ah mashiinka dhejiska iyo saldhiga alxanka. Waxaad sidoo kale u baahan tahay dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah SMT iyo THT.
Qalabka kormeerka iyo qalabka baaritaanka: Qalabka tijaabada ayaa muhiim u ah baaritaanka shaqeynta iyo kalsoonida golaha guddiga wareega.
Waqtiga Lead ee shirkii PCB:
Waqtiga hogaamintu wuxuu kuxiranyahay amarka. Kheyraadkeena iyo khibradeena, waqtigeena caadiga ah ee isku imaatinku wuxuu u dhexeeyaa 24 saacadood iyo 1 toddobaad. Waqtigu wuu kala duwanaan doonaa iyadoo kuxiran kakanaantashirkii guddiga wareega daabacay. Naqshadeynta gaarka ah waxay qaadan kartaa waqti dheeri ah.
Sanadihii la soo dhaafay, PCBFuture waxay uruurisay tiro aad u tiro badan oo wax soo saar PCB ah, Soo saar iyo khibrad khaldan, oo ku tiirsan khibradahaas, waxay siisaa machadyo cilmi baaris oo waaweyn iyo macaamiil ganacsi oo waaweyn iyo kuwa dhexdhexaad ah oo leh nashqadeyn hal joogsi ah, alxamid, iyo khalad ka sameynta wax-ku-oolnimo sare iyo kalsooni sare leh lakabyo badan oo daabacan oo laga soo qaaday shaybaarro ilaa qaybo badan Adeeg noocan ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha kala duwan sida isgaarsiinta, aerospace iyo duulista, IT, daaweynta caafimaadka, deegaanka, awoodda korontada, iyo qalabka baaritaanka saxda ah.